လယ်မြေ သိမ်းဆည်းခံရမှု စုံစမ်းရေးကော်မရှင် တိကျစွာဖြေရှင်းရန် လိုအပ် | ဧရာဝတီ
လယ်မြေ သိမ်းဆည်းခံရမှု စုံစမ်းရေးကော်မရှင် တိကျစွာဖြေရှင်းရန် လိုအပ်
ဇွဲထက်| December 9, 2012 | Hits:184
4 | | လွှတ်တော်မှ တာဝန်ပေးအပ်ထားသည့် လယ်ယာမြေ သိမ်းဆည်းခံရမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် အနေဖြင့် ပြတ်ပြတ်သားသား တိတိကျကျ ဖြေရှင်းရန် လိုကြောင်း လယ်ယာမြေ ပြဿနာ ကူညီ ဖြေရှင်းပေးနေသူများက ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့သည့် ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် စတုတ္တအကြိမ် အစည်းအဝေး အတည် ပြုချက် အရ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်သည့် လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခံရမှု စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်မှ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ခွဲ အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့စည်းကာ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်များတွင် ပေါ်ပေါက်နေသော လယ်ယာမြေ အငြင်းပွားမှုများကို စုံစမ်း စစ်ဆေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ဒီနေ့လာတယ်ဆို နောက်နေ့ ခြံစည်းရိုးတွေ ပိုတိုးခတ်လာတယ်။ ပြဿနာ ဖြေရှင်းနေစဉ် အတွင်း ကုမ္ပဏီတွေက လက်ဦးမှုယူပြီး လုပ်ယူလိုက်တဲ့ သဘောလို့ ယူဆတယ်။ လယ်ယာမြေ၊ လယ်သမားတွေကိစ္စကို လယ်ယာမြေ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်က တာဝန်ယူပြီးဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင် ပြတ်ပြတ်သားသားတိတိကျကျ ဖြေရှင်းစေချင်တယ်”ဟု ရန်ကုန်တိုင်း ရွှေပြည်သာ မြို့နယ်ရှိ လယ်သမားများ အရေးဆောင်ရွက်ပေးသည့် ဒေါ်မျိုးမျိုးအေးက ဧရာဝတီသို့ပြောသည်။
လယ်ယာမြေစုံစမ်းရေးကော်မရှင် စစ်ဆေးနေစဉ် ရွှေပြည်သာမြို့နယ်အတွင်းရှိ စက်မှုဇုန် တချို့တွင်ကုမ္ပဏီများက လက်ဦးမှု ယူပြီး မြေကွက်လပ်များတွင်ခြံစည်းရိုးခတ်သည့် အဖြစ်အပျက်များရှိနေကြောင်း ဒေသခံ လယ်သမားများက ပြောသည်။
လယ်ယာမြေ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်မှ တာဝန်ရှိသူများ စစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်း ကုမ္ပဏီများ ဘက်မှ ခြံစည်းရိုးခတ်ခြင်း၊ အဆောက် အအုံများ ဆောက်ခြင်းများကို တွေ့ရကြောင်း ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် တဦးကလည်း ပြောပြသည်။
လယ်ယာမြေ အရေး ကူညီဖြေရှင်း ပေးနေသူ ဦးနေမျိုးဝေက“လယ်ယာမြေနဲ့ အခြား မြေများသိမ်းဆည်းခံရမှု ကော်မတီလည်း ပေါ်လာရော သူတို့ဟာတွေ လုပ်ပြတဲ့ အနေနဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေက ခြံစည်းရိုးခတ်တာ။ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင် မလာတဲ့နေရာတွေမှာ လယ်သမားတွေက ခြံခတ်တယ်။ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ခြံပြိုင်ခတ်တဲ့ အလုပ်တွေ ပေါ်လာတယ်။ ဒီလိုတွေ လုပ်စရာမလိုဘူး။ ကော်မရှင်က ရပ်ခိုင်းထားရမှာ”ဟု ဆိုသည်။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ ရှေ့နေများကလည်း မြို့ရွာနှင့် အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေကို လယ်ယာမြေ လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိထား သူများက တိတိကျကျ လိုက်နာမှု မရှိသည့်အတွက် ယခုကဲ့သို့ အရှုပ်အရှင်း ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်လာရကြောင်း ပြောဆိုသည်။
“ကော်မရှင်က တွေ့ရှိချက်ရယ်၊ ဘယ်လို ဆောင်ရွက်ရမယ် ဆိုတာရယ် စုံစမ်းပြီး၊ အဖြေပါထုတ်ပေးနိုင်ရမယ်။ ကျနော်တို့ အား လုံးဟာ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်လို့ နိုင်ငံတော်အစိုးရ အနေနဲ့ ဘာတွေ လုပ်ပေးသင့်တယ် ဆိုတာကိုပါ အကြံပြုပေးနိုင် တဲ့ အရည်အချင်းတွေ ရှိတယ်”ဟု လယ်ယာမြေ သိမ်းဆည်းခံရမှု စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးခိုင်မောင်ရည်က ဆိုသည်။
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်၊ သုံးသပ်ချက်နှင့် အကြံပြုချက်များ ပါဝင်သည့် အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းသွားမည် ဖြစ်ပြီး စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်၏ တင်ပြချက်များအား ကျန် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များက သဘောတူရမည်ဖြစ်ကြောင်း လည်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး လယ်ယာမြေ သိမ်းဆည်းခံရမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲက ဒဂုံမြို့သစ်၊ ရွှေပြည်သာ၊ သန်လျင်မြို့နယ်များသို့ သွားရောက်ကာ လယ်ယာမြေ သိမ်းဆီးခံရမှုများနှင့် စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။
ယင်း ကော်မရှင်က ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ အစီရင်ခံစာ တင်သည့် အချိန်တွင် နစ်နာသူများဘက်မှ အခွင့်အရေး မည်မျှ ရသင့်သည် ဆိုသည့် အချက်ကိုလည်း ဆက်လက် ဆွေးနွေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းညွှန့်က ပြောဆိုသည်။
စင်ကာပူကြက်ခြေနီက မြန်မာကို ဒေါ်လာ ၂ သန်း လှူဒါန်း
ကြေးနီစီမံကိန်း တင်းမာမှု ပွင့်လင်းမြင်သာမှုဖြင့်သာ ဖြေရှင်းနိုင်မည်
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment Shwe Yoe December 11, 2012 - 10:30 am	The government should not do that since day one. If necessary, fair compensation must be delivered to the land owners. The way the government seized lands in Burma looks too much bullying and so corrupt. “Government can do whatever it wants” mentality is dirty and ignorant. Now, people are rising against the government and their cronies. Than Shwe’s rule was even worse than British colonial rule. It leaves too much shits everywhere. Poor Thein Sein has too much to clean.
အစိုးရ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရား ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ပြော